Cali Maxamed Geedi oo Olole xoogan ugu jira qabashada xilka Raiisal Wasaaraha Soomaaliya | SAHAN ONLINE
Cali Maxamed Geedi oo Olole xoogan ugu jira qabashada xilka Raiisal Wasaaraha Soomaaliya
MUQDISHO – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xiligan wada wadatashiyo xooggan oo ku aadan qofka noqonaya Raiisal wasaaraha Soomaaliya.
Sida uu qabo Dastuurka Madaxweynaha waxa uu haystaa muddo 30 maalmood ah kadib marks xilka loo dhaariyo in uu ku magacaabo Raiisal wasaaraha haddii aan Baarlamaanku xiliga u kordhin.
Xilka Raiisal Wasaaraha ayaa waxa jira siyaasiyiin badan oo doonaya iney qabtaan marka loo eego babka awood qaybsiga beelaha Soomaaliyeed ee aan dastuuriga ahayn ama aan ahayn mid loran ee uu yahay mid heshiis lagu yahay ayaa la garanayaa beesha Raiisal wasaaraha cusub uu ka imaanayo maadaama dalku aanu weli lahayn nidaamka Xisbiyada markaasoo uu xisbiga guuleystaa qaadanayo xilka Raiisal Wasaaraha dalka.
Warar ay heshay Sahan Online ayaa sheegaya in siyaasi Cali Maxamed Geedi uu kamid yahay magacyada safka hore ku jira in ay qabtaan xilkaas ,isagoona Olole ka dhex wada Xildhibaanada iyo weliba siyaasiyiinta kale ee isaga ku dhow.
Xildhibaanada qaar kamid ah ayaa u arka Cali Maxamed Geedi nin dheelitir u sameyn kara sixyaasada cusub ee dalku qaaday ,dad badan oo kasoo horjeedana in xilkaas loo magacaabo ayaa jira kuwaasoo u sababeynaya xiriirka uu la wadaago dalalka deriska gaar ahaana Itoobiya oo ciidamo xooggan Soomaaliya soo gelisay xiligii hore ee uu ahaa Raiisal wasaaraha haddana ku fashilantay farogelintii ay ku haysay doorashadii Soomaaliya.
Siyaasi Cali Maxamed Geedi ayaa waxaa Raiisal Wasaare u magacaabay Madaxweynihii hore ee DKMG Cabdullaahi Yuusuf (AUN) sanadkii 2004,waxa uu ahaa magac siyaasada Soomaaliya ku cusub,wuxuuna xilka iska casilay kadib markii ay is qabteen Madaxweynihiisi sanadkii 2007.